प्रविधिको प्रयोग - Khabar Page
खबर पेज २४ आश्विन २०७७, शनिबार ११:१५ मा प्रकाशित
थप्रेक । पञ्चकन्या गाँउपालिकाले पनि पहिलो पटक अनलाइन प्रणाली मार्फत पञ्जीकरणको काम सुरु गरेको छ । सेवाको सुरुवात गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता पराजुली खड्काले गरे । त्यस अवसरमा विभिन्न वडाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, वडा सदस्यहरुको सहभागिता थियो ।
गाँउपालिकाको वडा नं. ४ को कार्यालयले अनलाइनबाट ब्यक्तिगत घटना दर्ताको सुरुवात गरेको हो । गाउँपालिकामा पहिलो पटक यस्तो व्यवस्थाको सुरुवात भएको र सबैभन्दा पहिला वडा नं. ४ बाट गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नरेश पुडासैनीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यो प्रणाली प्रयोगमा आएसँगै वडा नं. ४ का नागरिकले डिजिटल जन्मदर्ता, बिबाहदर्ता, मृत्युदर्ता, सम्बन्ध विच्छेद तथा बसाईँ सराईँ जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
अस्पताल सञ्चालनको तयारी
लाकुरीभञ्याङ । नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकाले कोभिड १९ अस्पताल सञ्चालनका लागी आवश्यक जनशक्ती करार सेवामा पदपुर्ती गर्ने भएको छ ।
स्थानिय तहमा कोभिड १९ अस्पताल सञ्चालन सम्वन्धी मार्गदर्शन अनुसार ५ बेडको अस्पतालका लागी मेडिकल अधिकृत १ जना र स्टाफ नर्स २ जनाका लागी गाउँपालिकाले दरखास्त आब्हान गरेको हो ।
मेडिकल अधिकृत पदका लागी एमविविएस परिक्षा उतिर्ण गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएको र स्टाफ नर्सका लागी नर्सिङ विषयमा प्रबिणता प्रमाणपत्र तह उतिर्ण गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलामा दर्ता भएको हुनुपर्ने योग्यता निर्धारण गरिएको छ । गाँउपालिका आफैले कोभिड १९ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागी ५ बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
२४ आश्विन २०७७, शनिबार ११:१५
यो एउटा भर्चुअल दुनियाँ हो जहाँ मानिसहरूको संवाद हुने ठाउँलाई ‘रुम’ भनिन्छ र यी रुमहरू…